maythu၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
phyuthi သည်maythuကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ယနေ့မှာကျရောက်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ မွေးနေ့ရက်မြတ်မှသည် ကောင်းမွန်သော လိုအင်ဆန္ဒများ အားလုံးပြည့်စုံပြီး လိုချင်သော ပန်းတိုင်ကို အရောက်လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ မိသားစုမှ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ မွေးနေ့လက်ဆောင်တရားတော် -…"
maythu သည်သဒ္ဓါဖြူကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်...."
maythu သည်လှိုင်ကျော်ထွေးကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
maythu သည်phyuthiကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ၀မ်းသာမိပါတယ်ရှင်"
maythu သည်A BuddhismworldAdminကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ယနေ့မှာ ကျရောက်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ မွေးနေ့ရက်မြတ်မှသည် ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းရမယ့် ဘ၀ခရီး လမ်းတစ်လျှောက်မှာ အာရုံ ၅ပါး ကာမဂုဏ်မုန်တိုင်းတွေ တိုက်ခတ်လာသော်လည်း မတုန်မလှုပ် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်သော စိတ်ဓါတ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ် မိသားစု နဲ့ အတူ ဘ၀ကို…"
လှိုင်ကျော်ထွေး သည်maythuကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့် ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာတည်း ဟူသောအကျင့်မြတ်များကိုကျင့်၍ အေးငြိမ်းရာအမှန် မြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ အရောက်လှမ်း နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး-ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့…"
သဒ္ဓါဖြူ သည်maythuကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ကောင်းသောနေ့လေးပါရှင်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးချမ်းသာ စွာဖြင့် ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာတည်း ဟူသောအကျင့်မြတ်များကိုကျင့်၍ နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည် ကြီးကိုအရောက်လှမ်း နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးဖြစ်နိုင်ပါစေလို့…"
maythu သည် အောင်ကလေး's၏ 'ရဝေနွယ်အသစ် (ရဝေနွယ်-အင်းမ) " ဒီလို မကောင်းမှုမျိုးတွေ နောင် ဘယ်တော့မှ မလုပ်တော့ပါဘူး " လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ သီလ ဖြူစင်သူ ဖြစ်သွားပါပြီ။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"အရမ်းအရမ်းကိုတန်ဖိုးရှိပြီး မှတ်သားပညာရပါတယ် တင်ပေးတာကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် မိမိကိုယ်မိမိလည်းဆရာတော်ဟောသလိုအကုသိုလ်ပယ်နည်းနဲ့ပယ်ပြီး တတ်နိုင်သလောက်အကုသိုလ်ကိုလည်း နဲပါးအောင်ကျင့်ကြံပါတော့မယ်.............."
မေ 15, 2012
maythu သည် အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး)'s၏ 'တေမိယမင်းသားကဲ့သို့ နေမည် ဆိုလျှင်'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
မေ 14, 2012
A BuddhismworldAdmin liked maythu's profile
မေ 12, 2012
A BuddhismworldAdmin သည်maythuကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှနွေးထွေးစွာ ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါစေ။ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကြိုတာနောက်ကျခဲ့သည်ရှိသော် နားလည်ပေးရန်အနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။ မိမိမေလ်းထဲမှ…"
maythu ဓမ္မ မိတ်ဆွေအသစ်တစ်ယောက်ကို ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺မှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်
☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺.... မှတရားဓမ္မများကိုလေ့လာမှတ်သားကျင့်ကြံကြိုးစား နိုင်ရန်အတွက် ကြိုဆိုပါတယ်......အေးချမ်းစွာ တရားဓမ္မ များကိုရှာဖွေလေ့လာနိုင်ပါစေ....။
9:14pm အချိန်အောက်တိုဘာ 12, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
မွေးနေ့လက်ဆောင်တရားတော် - https://app.box.com/s/u6f9i3bcoz3po1exh6dpf8wr0io356ts
11:01pm အချိန်အောက်တိုဘာ 12, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ယနေ့မှာ ကျရောက်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ မွေးနေ့ရက်မြတ်မှသည် ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းရမယ့်
ဘ၀ခရီး လမ်းတစ်လျှောက်မှာ အာရုံ ၅ပါး ကာမဂုဏ်မုန်တိုင်းတွေ တိုက်ခတ်လာသော်လည်း မတုန်မလှုပ် ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်သော စိတ်ဓါတ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မိသားစု နဲ့ အတူ ဘ၀ကို ငြိမ်းအေးစွာ ဖြတ်သန်းရင်း ဘ၀နှင့်ဆန္ဒထပ်တူကျလို့ဒါန၊ သီလ၊
ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်ပါစေလို့ ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ မိသားစုမှ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။
မွေးနေ့လက်ဆောင်တရားတော် - http://thitsarparamisociety.com/wp-content/uploads/mp3/DrNandamalabhivamsa/disc1/ndml.11/259-ndml.mp3
6:00pm အချိန်အောက်တိုဘာ 12, 2012, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့် ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာတည်း ဟူသောအကျင့်မြတ်များကိုကျင့်၍ အေးငြိမ်းရာအမှန် မြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ အရောက်လှမ်း နိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး-ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် ဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ ကျနော်တို့ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှ မွေးနေ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ...
5:35pm အချိန်အောက်တိုဘာ 11, 2012, တွင် သဒ္ဓါဖြူ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကောင်းသောနေ့လေးပါရှင်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးချမ်းသာ စွာဖြင့် ဒါန၊သီလ၊ဘာဝနာတည်း ဟူသောအကျင့်မြတ်များကိုကျင့်၍ နိဗ္ဗာန်ရွှေပြည် ကြီးကိုအရောက်လှမ်း နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူးဖြစ်နိုင်ပါစေလို့ ကျွန်မတို့ဗုဒ္ဓကမ္ဘာမှ မွေးနေ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေး လိုက်ပါတယ်ရှင်။
9:32pm အချိန်မေ 12, 2012, တွင် A BuddhismworldAdmin မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကြိုတာနောက်ကျခဲ့သည်ရှိသော် နားလည်ပေးရန်အနူးအညွတ် တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။
2. မိသားစု တစ်စုလုံး ငြိမ်းအေးလိုလျှင်။
4. ဗုဒ္ဓဟောကြားသော မိတ်ဆွေကောင်းများ။
5. ဘ၀ကိုကျော်ဖြတ်တဲ့အခါ မိမိကိုယ်ဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲ
6. ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် ပိယဒဿီမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
7. ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် ဓမ္မဒဿီမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
8. တစ်ယောက်တည်းငြိမ်းချမ်းအောင်နေနည်း။(ယောဆရာတော်ကြီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဟောကြား)
9. ဒေါက်တာအရှင်ဆေကိန္ဒ၏ ဘ၀လှအောင်ပြင်ချင်စိတ်။
10. ၀ိသာခါရသောဆု (၈)ပါး။
11. ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် တိဿမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
12. နတ်ပြည်၊ ဗြဟ္မာ့ပြည်မှ မြေအမျိုးအစား။
13. ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် သုဇာတမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
14. ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် အတ္ထဒဿီမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
15. ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော် မင်္ဂလမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတော်တွင် ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူခြင်း
မြူနှင်းမှုံ သည်thein wai's ၏ 'မိသားစု တစ်စုလုံး ငြိမ်းအေးလိုလျှင်။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။